किन गर्यो यस्तो सिविल हस्पिटल ले जय किशन बस्नेत को बैनी लाई?(भिडियाे सहित) – News Nepali Dainik
किन गर्यो यस्तो सिविल हस्पिटल ले जय किशन बस्नेत को बैनी लाई?(भिडियाे सहित)
प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्विन २३, २०७८ समय: १८:४६:१४
गर्दा के हुदैन र ? भन्ने उदाहरण बनेकी छिन बुटवलकि कमला बेलबासे । पुरुषले मात्र होइन महिलाले पनि पुरुष सरह काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेकी छिन कमला अहिले । इलेक्ट्रीक र प्लमिङको काम श्रीमानसगैँ गर्दै आएकी कमला अहिले उक्त कार्यमा दक्ष भै सकेकी छिन । अहिले आफुहरुलाई कामको कुनै कमि नभएको बरु काम गर्न भ्याई नभ्याई भएको उनले बताएकी छिन । श्रीमान सगैँ काम सिकेकी कमला अहिले श्रीमानसगँ सगै काममा जान्छिन ।
सुरुसुरुमा केहिले महिला भएर पुरुषले गर्ने काम गर्न हिडेकी भनेता पनि अहिले भने सबैले हौसला दिने गरेको राम्रो काम गरेको भन्ने गरेको उनी बताउँछिन । कमला यो काममा लाग्नुमा आफ्नो श्रीमाको साथ भएको बताउँछिन । यदि श्रीमानले आफुलाई यश काम नसिकाएको भए आफु यस क्षेत्रमा आउन नस्क्ने उनी बताउँछिन । श्रीमान बिरामी भए पछि घर चलाउन र ऋण तिर्न गार्‍हो भए पछि उनले आफू पनि श्रीमानसगैँ काम गर्न जाने बताईन । जसलाई श्रीमानले स्विकार्दै सगै काममा लगेर सिकाएको उनी बताउँछिन । काम गर्न सके जति पनि पाईने उनी बताउँछिन.
Last Updated on: October 9th, 2021 at 6:46 pm